Mid ka mid ah shaqaalahayga ayaa hadda ila soo hadlay si uu iigu wargeliyo inuusan awoodin inuu yimaado shaqada maxaa yeelay ilmihiisa ayaa qaba ifilada. Miyuu xaq u leeyahay fasax gaar ah sababtaas darteed? Mise waa inuu maalin fasax ah ka qaataa mushahar?
Xaaladaha qaarkood awgood, shaqaalahaaga ayaa maqnaan kara si uu u daryeelo cunugiisa jiran.
Iyada oo ku xidhan darnaanta xaaladda caafimaad ee ilmaha iyo da'da, shaqaalahaaga, ha ahaado lab ama dhedig, waxay ka faa'iideysan karaan 3 illaa 5 maalmood oo maqnaansho ah sanadkiiba ama, haddii loo baahdo in la joojiyo hawshiisa muddo dheer, si loo tago joogitaanka waalidnimo.
Mid kasta oo ka mid ah shaqaalahaaga ayaa ka faa'iideysan kara fasaxa aan mushaharka lahayn ee 16 maalmood sanadkiiba si uu u daryeelo cunug jira ama dhaawacan oo da'diisu ka yar tahay 3 jir oo ay mas'uul ka yihiin. Foosha, farshaxanka. L. 1225-61). Muddadan waxaa loo kordhiyay 5 maalmood sanadkii haddii cunugga ay khusayso uu ka yar yahay hal sano ama haddii shaqaaluhu daryeelo ugu yaraan 3 carruur ah oo 16 jir ka yar.
Faa'iidada 3-da maalmood ee maqnaanshaha carruurta jirran kuma xirna xaalad da 'weyn.
Waa lagama maarmaan in lala tashado heshiiskaaga wadajirka ah maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inuu ...
Ilmaha jiran: shaqaalahaagu xaq ma u leeyahay maalmo fasax oo cayiman? July 10th, 2021Tranquillus
horeMaxaa sharxaya cabsida qoraalka?
socdaCusub: RPS iyo QVT, waa talaabo talaabo talaabo guul ah